စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page 27 of 30 | Frontier Myanmar
ထိုင်းသို့ မြန်မာများ သွားရောက်မှု ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာ
ယခုနှစ် ပထမလေးလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မြန်မာများ သွားရောက်မှုမှာ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်ဟု ထိုင်းခရီးသွားအာဏာပိုင်အဖွဲ့(TAT)က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် မြန်မာခရီးသည် ၁၄၂,၃၃၁ ဦးရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာခရီးသည် ၃၄၅,၀၀ ဦးအထိ လာရောက်ရန် TAT က မျှော်လင့်ထားကာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်.
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရှယ်ယာထုတ်မရောင်းရန် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများကို တားမြစ်
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အမည်ပေါက်စာရင်းဝင် မဖြစ်သေးသလို၊ စတော့အိတ်ချိန်း၏ အာဏာပိုင် ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်(SECM)က ရှယ်ယာ ထုတ်ရောင်းခွင့်ပြုမထားသည့် အများပိုင်နာမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများအနေနှင့် ရှယ်ယာထုတ်များ ထုတ်မရောင်းရန် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် ကော်မရှင်က ကြေငြာချက်ထုတ်တားမြစ်လိုက်သည်။ ဥပဒေအရ စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင် အမည်ပေါက်ထားသည့်.
မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် ကွန်ယက်သစ်ကို SEANET က လွှင့်တင်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် မြန်နှုန်းမြင့် Broadband အင်တာနက်စနစ်အား အသုံးပြုနိုင်မည့် VSAT(Very Small Aperture Terminal) ကွန်ယက်သစ်ကို SEANET Myanmar က ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့က စတင်လွှင့်တင်လိုက်သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ(ICT) အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖံ့ွဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ VSAT ဟာ.
နေပြည်တော်၊ မေ ၁၂ ရန်ကုန်မြို့လည်ရှိ ရန်ကုန်အထွေထွေ ဆေးရုံကြီးအနီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေေနရာမှာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆောက်မယ့် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ယနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ မြေ ၄ ဒဿမ ၃ ဧကပေါ်မှာ တည်ဆောက်မယ့် The Parkway Yangon Hospital စီမံကိန်းဟာ အရင်အစိုးရလက်ထက်က.